CAAFIMAAD-Q2: Zimyun Jeeb-jeebka-Gimbal Hada Waa Laheli Karaa | War gadget
Eder Esteban | | Gargaarka, qalabka
Qaybta gimbal way sii kordheysay in muddo ah iyada oo xulashooyin badan oo kaladuwan ay jiraan. Zhiyun hadda wuxuu nooga tagayaa nuuca uu u leeyahay badeecadan, oo loogu talagalay si aan u helno fiidiyowyo xasiloon oo tayo sare leh. Shirkaddu waxay soo bandhigeysaa SMOOTH-Q2 gimbal si rasmi ah, taas oo naga caawin doonta markay tahay duubista fiidiyowyo tayo leh xasilooni.
In kasta oo SMOOTH-Q2 ay sidoo kale u taagan tahay cabirkeeda yar. Maaddaama shirkaddu ay naga tagayso moodal jeebkiisu le'eg yahay, samaynta isticmaalka iyo gaadiidka gaar ahaan raaxo iyo fudeyd markasta. Marka qaar badan waa ikhtiyaarka ugu xiisaha badan.
Si ka duwan moodooyinka kale ee suuqa, Zhiyun SMOOTH-Q2 horeyba wuxuu ula yimid cabir dhimis ah. Sidaa darteed, uma baahnid inaan isku laabno ama aan dheereyno markaan adeegsan doonno. Waxay leedahay dherer ah 204 mm, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu habboon in meel walba nala aado. Waxaan ku qaadan karnaa boorsada iyadoo raaxo weyn leh. Intaa waxaa dheer, in lagu sameeyo jirka aluminium, waa moodel aad u adag, iyo dahaadhka silikoonku wuxuu ka dhigayaa mid raaxo leh in la qabto marka ay tahay inaan adeegsanno.
Muuqaal kale oo muhiim ah oo ka mid ah gimbalkan ayaa ah inay aad u fududahay in la isticmaalo. Maaddaama ay leedahay qaabab badan oo adeegsi ah, oo la jaanqaadaya xaalado kala duwan, iyo waxaan u kala beddeli karnaa hababka waqti kasta adoo riixaya hal badhan. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay soo bandhigtay qaabab cusub oo gimbalkan ah, sidaa darteed dadka isticmaala waxay leeyihiin fursado badan oo adeegsi ah. Qaabka ugu dambeeyay waa POV Mode, kaas oo kuu oggolaanaya inaad sameysid duubitaan 360-digrii ah oo ku yaal seddex faasas, saameyn aad u dheereeya.
Waan awoodnaa u isticmaal Zhiyun SMOOTH-Q2 labadaba taleefannada Android iyo iPhone Si fudud. Waxaa loo habeeyay inay si fiican ula shaqeyso labada nidaam ee ka shaqeeya arrintan. Inkasta oo qaar ka mid ah shaqooyinka ay ku xirnaan doonaan moodeelka qaaska ah, markaa qeexitaannada waa in markasta lala tashado, si loo ogaado qaababka ama shaqooyinka loo adeegsan karo kiis kasta oo leh saxeexan saxeexan Guud ahaan, maahan wax soo bandhigaya dhibaatooyinka, sidaa darteed waxaan si fudud ugu raaxeysan karnaa qaababkeeda iyo shaqooyin badan.
Isticmaalkeedu waa mid fudud, sidaan soo sheegnay, tan sidoo kale waxay ka muuqataa naqshadeynta. Tartankan 'SOOTH-Q2' waxaan ku arki karnaa waqti kasta inay fududahay in la dul dhigo taakulaynta si loo isticmaalo. Sidoo kale waa wax aad u fudud in taleefanka laga saaro markii aan dhammeyno isticmaalka gimbal si kasta. Ma qaadan doonto waqti dheer in la sameeyo dhaqdhaqaaqan, taas oo markaa gacan ka geysaneysa sida ugu wanaagsan looga adeegsan karo dhammaan noocyada xaaladaha. Miisaanka ugu badan ee ay ku taageerayso kiiskan waa 260 garaam, oo aan sida caadiga ah la dhaafi doonin, maxaa yeelay taleefannada ayaa khafiifa, laakiin waxaa wanaagsan in la ogaado in tani ay tahay xadka uu gimbal oggol yahay.
Intaa waxaa dheer, waan awoodnaa si fudud u wareeji booska taleefanka ee gimbal-kan. Sidan oo kale, waxaan ku duubi karnaa dhammaan noocyada fiidiyowyada, ha ahaato mid taagan ama mid toosan. Sidoo kale haddii aan dooneyno inaan isdiwaan galino ama aan si toos ah u tabino iyadoo la isticmaalayo gimbal-ka Zhiyun waa macquul. Wax shaki kuma jiri karo inay daneynayaan isticmaaleyaal badan, oo doonaya inay awoodaan inay sameeyaan fiidiyoow toos ah oo aad u deggan oo la jaan qaada daqiiqad kasta. Dhinac kale oo muhiim ah oo ku jira qaabkan nooca Shiinaha ah, sidaas darteed.
Sidaad u aragto, SMOOTH-Q2 ka sumadda Shiinaha Waxaa loo soo bandhigaa sidii gimbal dhammaystiran oo wax ku ool ah, kaas oo aan u adeegsan doonno dhammaan noocyada xaaladaha. Cabbirkeeda yar iyo sahlanaanta adeegsiga ayaa ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan in lagu tixgeliyo qaybtan suuq ee dad badan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato gimbalkan iyo sida aad ku sameyn karto, geli bogga shirkadda. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan xogta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » CAYAAR-Q2: Gimbal jeebka ku jira oo Zhiyun ah
Kani waa GoPro Hero cusub 8 Black, qalabkiisa iyo Max